Okwu - Buddhatrends
Ejikwa Buddhatrends rụọ ọrụ a. Na saịtị ahụ, okwu "anyị", "anyị" na "anyị" na-ezo aka na Buddhatrends. Buddhatrends na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwá ọrụ na ọrụ dị na saịtị a maka gị, onye ọrụ, na-adabere na ịnakwere nke okwu niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa dị na ebe a.
Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla, ndị Buddha, ndị isi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ikikere nwere ike ịdaba maka nsogbu ọ bụla, ọnya, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla, kpọmkwem, ihe ọ bụla dị mma, gụnyere, na-enweghị njedebe uru furu efu, ego efu, ego furu efu, njigide data, ụgwọ mgbanyụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri emebi, ma ọ bụ na-adabere na nkwekọrịta, ahụhụ (gụnyere ileghara anya), ọrụ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, eji ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla na-eji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọ bụla ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla maka iji ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ọ bụla njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihe ọ bụla, ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla e mepụtara n'ihi ọrụ nke ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, transmitted, ma ọ bụ nke ọzọ mepụtara site na ọrụ ahụ, ọ bụrụgodị na ọ gwara ha ihe ha ga-eme. N'ihi na ụfọdụ na-ekwu ma ọ bụ ndị ọchịchị anaghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka ọdachi ma ọ bụ ọdachi, na ụlọnga ma ọ bụ ikike ndị a, ibu ọrụ anyị ga-ejedebe na iwu kachasị oke.
Ị kwenyere ịkwado, chebe ma jide ndị Buddhatrends na-adịghị emerụ na ndị nne na nna anyị, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị uweojii, ndị nduzi, ndị ọrụ, ndị na-enye ọrụ, ndị na-enye ọrụ, ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ na ndị ọrụ. ụgwọ ndị omeiwu, nke ndị ọ bụla nke atọ mere ma ọ bụ na-esite na mmebi iwu gị ma ọ bụ ihe ha na-etinye na ntinye aka, ma ọ bụ mmebi nke iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Usoro okwu a na nkwekọrịta dị iche iche anyị na-enye gị Ọrụ ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu nke 5900 rue de verdun montreal Quebec CA H4H 1M4.
A ga-ezigara ajụjụ banyere Usoro nke Ọrụ site na iji kọntaktị kọntaktị